Julian Assange: Aasaasaha shabakadda Wikileaks oo xabsiga loogu sii heyn doono cabsi laga qabo awgeed - BBC News Somali
Julian Assange: Aasaasaha shabakadda Wikileaks oo xabsiga loogu sii heyn doono cabsi laga qabo awgeed
Image caption Waxaa la filayay in Julian Assange xabsiga laga sii daayo 22-ka bishan Sitembar.
Arrintan ayey garsooreyaasha kiiskiisa acanta ku haya u sababeeyeen cabsi laga qabo "inuu ka baxsado caddaaladda", maadaama horay uu u sameeyay isku day noocaas ah, oo dhicisoobay.
Hase yeeshee garsoorka maxkamadda Westminster ayaa dhageystay walaac "aad u xoiog badan" oo saabsan cabsi laga qabo inuu mar kale isku dayo fal baxsasho ah.
Ninkan u dhashay waddanka Australia, oo 48 jir ah ayaa dagaal ugu jira sidii uu u hor istaagi lahaa go'aan loogu gacan galin karo dowladda Mareykanka, oo u doondooneysa eedeymo la xiriira inuu sir ka faafiyay xukuumadda Washington.
Assange oo safaaraddii martigalisay u badalay "xarun basaas"
Garsooraha maxkamadda degmada ee lagu magacaabo Vanessa Baraitser ayaa maanta oo Jimce ah ku tidhi Assange, oo maxkamadda uga qeyb galan muuqaal: "Maanta waxaa maxkamadda lagaaga baahday maadaama uu xukunkii xabsiga ee lagugu riday ku dhowyahay dhammaad.
"Markii wakhtigaas la gaaro xaaladdaadii ahayd maxbuusnimada waxay isku baddali doontaa eedeysane wajahaya dacwad ku saabsan in waddan kale loo gacan galiyo".
Waxay sidoo kale u sheegtay in qareenkiisa uu diiday inuu maxkamadda ka diiwaan galiyo codsi damiin ah, isagoo matalaya, waxayna intaa kusii dartay: "Dabcan taasna la yaab malaha, maadaama aad horay isugu dayday inaad ka baxsatid dacwadda noocan ah".
"Anigana fikrad ahaa, waxaad aad u hubaa inaad mar kale baxsasho isku dayi doontid, haddii aan damiin kugu sii daayo"
Waxaa lagu eedeeyay inuu la shaqeyn jiray falanqeeyihii hore ee sirdoonka milatariga Mareykanka, Chelsea Manning i, uuna "si sharci darro ah ku helay, kuna faafiyay macluumaad dhammeystiran oo ay lahayd waaxda difaaca Qaranka".
Julian wuxuu muddo 7 sano ah ku dhex noolaa gudaha safaaradda Ecuador ee ku taalla magaalada London ka hor inta aysan saraakiisha waddanka Ecuador ku wareejinin mas'uuliyiinta Britan bishii Abriil ee sanadkan.